सरु श्रेष्ठ, अपहरण र हत्याको घटना आजभोलि नियमित जस्तो भैरहेको खबर हामीले सुन्न्ने गछौं । तर, हिजो आज नैतिकता मुल्यमा ह्रास आउने बढी मात्रामा भैरहेको विभिन्न पत्रपत्रिका, फेसबुक, ट्विटर मार्फत थाहा पाउन सकिन्छ ।
प्रायः जसो साना ठूला सबै घटनाहरुमा नेपाल प्रहरीले पूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको सुन्नमा पनि आईन्थ्यो । अहिलेको समयमा बढी जस्तो अपराधी घटनामा देश र जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी नै आत्मरक्षाको लागि इन्काउन्टर गर्ने अर्को घटनाको क्रम बढिरहेको छ ।
तर, इन्काउन्टर गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग यो मनसाय कमी भैरहेको छ जहाँ दोषी मात्र नभएर निर्दोषको पनि मृत्यु हुन सक्छ । यदि आत्मरक्षा कै लागि अन्तिम उपाय इन्काउन्टर गर्नु छ भने त्यहाँ एउटा विश्वासनियता आधार हुन जरुरी छ ।
यस्तै केही दिन अघि ११ बर्षिय बालक निशान खड्काको अपहरण गरेर विभत्स हत्या गरेको आरोपमा दुई यूवालाई प्रहरीले इन्काउटरमा मारेका थिए तर प्रहरीले गरेको इन्काउन्टर बारे बिवाद पनि चलेको थियो भने अपहरणमा संलग्नलाई फेक इन्काउन्टर गरिएको भन्दै प्रहरी र सरकारको आलोचना पनि भयो ।
यस विषयमा अहिले विभिन्न सोसल मिडियाहरुले इन्काउन्टरकमा मारिएका दुई जना गोपाल तामाङ र अजय तामाङको दोहोरो मुठभेडमा ज्यान गएको दाबी गरे पनि महाशाखा प्रहरीले नगदेस्थित कोठाबाट अजय र गोपाललाई सादा पोसाकमा आएका प्रहरी टोलीले कोठा भित्रै कुटपिट गरेर आँखामा पट्टी बाधी गाडीमा राखी जंगलतर्फ लगेको दर्जनौ प्रत्यक्षदर्शीले बताएको पनि पत्रपत्रिकामा उल्लेख छ ।
सबैले देख्ने गरि घरबाट पक्राउ परेका अजय र गोपाललाई कानुनी कार्बाही गर्नुको साटो मुठभेडमा मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीले बताएका छन् । तर, यो घटनाले प्रहरी नियतमा पुरै शंका देखिन्छ ।
देश र जनताका रक्षकबाट नै बिश्वासका कामहरु टुट्दै गैरहेका छन् । एक पछि अर्को गर्दै कानुनी नियम भङ्ग भैरहेको जो कोही सर्वसाधरणले सहजै मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । मुख्य त कानुनी नियममा ह्रास आउनु जनताबाट हैन, जनताका लागि बनेका रक्षकबाट नै शुरु भएको छ ।
कतिपय फेसबुक प्रेमीहरुले हत्यारालाई इन्काउन्टर मात्र हैन, लास काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर गिद्ध र कुकुरलाई काँचो मासु खुवाउनु पर्छ र नेपाल प्रहरीले जे गरेको छ त्यो सराहनियता छ भन्देै आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरेका छन् भने कसैले हत्यारालाई ड्याम्म ड्याम्म गोली हानी फुक्लुक्क फुक्लुक्क ढालेकोमा गर्व लागेका विचारहरु पोष्ट गरेका छन् ।
आखिर किन आवेगमा आएर मानिसहरु समस्याबाट पूनः समस्या नै रोज्छन् ? के हत्याराको पनि हत्या गरिदिने बित्तिकै समस्याको समाधान हुन्छ ? यस्ता कुरामा किन अपसोच छन् मानिस ? अपहरण गर्नुको मुख्य कारण के हो ? किन गरियो अपहरण ?
उक्त घटनाको नालीबेली पत्ता लगाउन त अवश्य पनि अपहरणकारी अथवा हत्याराको नै आवश्यक पर्छ, हैन भने ‘जाल बुन्ने माकुरो फस्ने पुतली, जस्तै हुन्छ । यस्ता घटना नभएका पनि हैनन्, खोज्ने हो भने अनगिन्ति भेटिन्छन् । यस्ता घटनाहरु निर्मुल पार्न त असम्भव छ तर जस्को लागि कानुनी नियम ‘कोमलको फुल हैन काँडा हुनु पर्दछ ।
यी नै यस्ता प्रसंग उठाइरहँदा कानुनी नियममा खोट लगाउने ठाउँ बालक निसान खड्काको अपहरणपछि भएको हत्या र यस घटनामा शंकाको भरमा सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले हत्यारालाई गिरफ्तार पछि मुठभेडमा मारिएको खबर बाहिरिएको छ ।
यो घटनालाई सर्सर्ती हेर्दा नेपाल प्रहरी माथि खोट लगाउने र शंका गर्ने ठाउँ अथाह देखिन्छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले कोठामा नै आइ ११ बर्षिय बालकको हत्याको अभियोगमा दुई तामाङलाई कुटपिट गरि पछि आँखामा पट्टि लगाएर लगेको पनि खुलासा भएको छ ।
तर, हत्याको आरोपमा पक्राउ परिसकेका हत्याराहरु पूनः कसरी इन्काउन्टरमा मारिए ? बिना रहस्य यो घटना असम्भव छ । यस घटनामा नेपाल प्रहरीको पनि ठूलै गल्ती देखिन्छ । हत्याराको गिरफ्तार पछि घटनाको कुनै सोधखोज नै नभइ कसरी मारिन्छ ?
अब यो घटनालाई कुन रुप दिने हो त्यो त कानुनको दायरा भित्र पर्छ । तर, यो घटनाको जस्तै हत्यारालाई पक्रेर पनि पछि कुनै खोजतलास नै नगरी अपहरणकारीको मृत्युलाई इन्काउन्टरको खोल ओढाउने हो भने ‘‘सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाचिने’ खेलको झाङ् पलाउदै जानेछ । आशा गरौँ निष्पक्षता साथ अपराधीहरुको कारबाही होस् ।
कुनै अर्थ नै नबुझि हत्याराको मृत्युमा रमाउनेहरु एक पटक सबैले सोचौँ घटनाको छेउकुुना । उक्त घटना पछि पीडितका परिवार जति पिडामा छन्, हामीले हत्यारा सोचेको पिडकका परिवार पनि उतिकै पिडामा छन् । दुःख पिडामा सबैको मन उस्तै भारी हुन्छ, त्यस कारण सबैले यो कुरा मनन गरौँ।